QORSHAHA GARLIC: WAXA KA FIICAN - GACMO LA SAMEEYEY AMA LA IIBSADAY, SHARAXAADDA QALABKA LOOGU TALAGALAY TAREENKA IYO MOTOBLOCK, SAWIRRO LOOGU TALAGALAY QALABKA GURYAHA LAGU SAMEEYO - BEER CAGAARAN
Samaynta Fududaynta Shaqada Beeraha leh Geedaha Baashaalka - Noocyada Aasaasiga ah, Dhibaatooyinka iyo Cunnada
Markaad la shaqeyneyso beerashada dalagyo kala duwan, waxaa mararka qaarkood lagama maarmaan u ah in la baabi'iyo foosha gacanta. Ujeedadaas awgeed, beertu waxay isticmaashaa abuurayaasha mashiinka khaaska ah ee baradhada, basasha iyo khudaarta kale.
Beerta loogu talagalay toonta ayaa magacisa "magaca bacda qashinka". Waxay ka caawisaa fududaynta shaqada gacanta, iyadoo la siinayo natiijo fiican. Ka dib, natiijada ugu dambeysa waxay si toos ah ugu xiran tahay tayada beerashada.
Isticmaalka sawirada, waxaad samayn kartaa dhirta gacmahaaga ee toonta leh gacmahaaga, ama xitaa qalab gaar ah oo loogu talagalay socodsiiyaha. Sidee loo sameeyaa tan iyo waxa laga yaabo in ay tahay faa'iido iyo khasaaro, waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa qodobkan.
Mabda'a shaqada ee beeralaydu waa mid fudud. Qalabka wuxuu ka kooban yahay muraayad, muraayad, silsilad, weelka iyo weelka abuurka. Garlic waxaa lagu shubaa weelka ka hor inta aan la beeri. Marka xigta, abuuruhu wuxuu si toos ah u jarayaa furrows yar oo dhulka hoostiisa iyo dhirta caleemo kasta oo toon ah dhulka, ka dibna ku rusheeysa adigoo adeegsanaya coulter.
Maxaa loo isticmaalaa soo degitaanka?
Dabcan, toonta lagu beeri karo waxaa loo samayn karaa gacanta. Si kastaba ha noqotee, haddii qiyaasta qashinka ah ay ka weyn tahay sariiraha, iyada oo aan la qabsashada noocan ah, shaqadu waxay noqon doontaa mid aad u adag waxayna qaadataa waqti dheer. Sidaa darteed, xitaa beeraha yaryar, waxaa macquul ah in la iibsado ugu yaraan buug-gacmeed.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira daraasiin moodeel oo ah beeritaanka toonta ah ee suuqa, si kastaba ha ahaatee Marka la eego mabda'a hawlgalka, 3 nooc oo waaweyn ayaa la kala saari karaa.:
seeder on motor-block;
Doorashada ugu qiimaha badan. Waxaa loo isticmaalaa meelaha yaryar. Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay dadaal jidheed: waxaad u baahan tahay inaad si madaxbannaan u sameysatid seederaha, u geey goobta iyo inaad sii waddo seeder hortaada, adigoo maraya khadka beerta oo dhan.
Xoojiyay socodka. Shaqada, waa ku filan inaad isticmaasho dhejis gaar ah oo aad u hagaajiso qalabka si aad u hesho habka la doonayo.
Ku dheji xayawaanka. Seeder noocan ah waa ku haboon yahay in lagu shaqeeyo goobaha waaweyn, naqshadeynta waa mid aad u weyn. Waxay kuu oggolaataa inaad abuurto tiro badan oo ah miraha.
Qalabka kala duwan ee qalabka
Marka lagu daro xayawaanada kale, beerista tolku waxay ku kala duwan yihiin tirada safafka ay ku beeran karaan wakhti isku mid ah. Noocyo kala duwan ayaa laga heli karaa hal ilaa lix saf.. Isla mar ahaantaana, buugagahaan waxay had iyo jeer leeyihiin 1 saf, sababtoo ah safafyada dheeraadka ah waxay ka dhigaan dhismaha culus waxayna ka dhigaan mid deggan, taas oo macnaheedu yahay inay adagtahay in la shaqeeyo.
Beereyaal ku yaal tareenka socodka wuxuu ka kooban yahay hal ilaa afar saf, oo kaliya moodooyinka loogu talagalay tractor waxaa jira 5-6 saf oo midkiiba. Intaa waxaa dheer, beeraley qaar ka mid ah weelasha laga saari karo, taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku hagaajiso safka.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka noocyada kala duwan ee qalabka
Noocyada Buug-yarahan Socdaalka socodka Dhaqdhaqaaqa
Waxtarka: Ma aha lagama maarmaan in la isticmaalo shidaalka.
Nooca ugu caansan ee dabiiciga ah ee seeders.
Nasiib-darrada naqshadaynta ayaa kuu oggolaanaysa inaad adigu isa-soo-ururiso qalabkaaga.
Si fudud loo isticmaalo: Looma baahna shaqaale dheeri ah.
Waxaad dhali kartaa dhowr jeer miraha ka badan (marka la barbardhigo buug-gacmeedka buugaagta).
Helitaanka Isticmaalka: Si ka duwan tareenka, socodka gadaashiisa wuxuu ku yaalaa dhammaan beeralayda oo dhan.
Suurtagalnimada isticmaalka carrada kasta.
Waxay leedahay awoodda iyo waxqabadka ugu badan.
Ku haboon goobaha waaweyn.
Waqti weyn iyo shaqo jireed.
Ku filan oo keliya beeraha cakiran iyo carrada dabacsan.
Ha sameynin qaabeynta qaabka iyo gaadiidka goobta degaanka.
Waa in aad si joogta ah u iibsataa shidaalka loogu talagalay motoblock.
Waxa aad u baahan tahay inaad iibsato qalab gaar ah ama rakibo.
Qalabka ugu qaalisan ee qalabka.
Gawaarida ayaa sidoo kale waa iib aad u qiimo badan, taas oo aan ka jirin qoys kasta.
Digriiga garbaha iyo geedaha toonta - waa maxay farqiga?
Magacyadoodu way isku mid yahiin oo waxaa jiri kara jahwareer. Hase yeeshee, hawlaha noocyada tiknoolajiyadani way ka duwan yihiin. Digriiga Garlic - qalab loogu talagalay carbinta qashin ee toonta, taas oo ah, goynta. Waxa kale oo ay ku jirtaa silsilad iyo weelal, waxaana lagu rakibi karaa xayndaab, ama socodka gadaashiisa, sida qoraxiis toon. Hannaanka, nalalka qoyan ayaa laga soo tuurayaa dhulka waxaana lagu ururiyaa weel.
Iibso ama sameyso guri guri?
Isku duwidda qalabka dhulka ku jira gacmahaaga ma aha tan adag., xataa guriga. Laakiin waxaa lagula talin karaa oo kaliya dhowr xaaladood:
Mulkiiluhu wuxuu leeyahay dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waa muhiim inaad horay u qaadato sawir, sida ku cad qorshaha loo samaynayo, iyo hubi in wax walboo kaydka ah. Qaybo ka mid ah (tusaale ahaan, silsilad) ayaa laga qaadi karaa baaskiilka hore, kuwa kale (qalab, weelal) ayaa laga soo qaadan karaa garaashka ama fadhiga. Dabcan, waxaad iibsan kartaa dhowr waxyaalood, laakiin haddii aad si gaar ah u iibsato qaybaha oo dhan, waxay noqon doontaa sahlan oo ka raqiisan inaad iibsato qalab diyaar ah.
Mulkiiluhu waa mid aad u yar ama yar oo la yaqaan mashiinada beeraha. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inay adagtahay, xitaa haddii indhahaagu hortaagan yihiin tilmaam cad iyo sawir.
Waa lagama maarmaan in qalabka loo sameeyo "keligiis". Tusaale ahaan, samee weelasha laga saari karo miraha kala duwan ama ku rakib weelasha bacriminta iyo waraabinta. Dukaamada, seeders leh sifooyinka horumarsan mar walba kharash badan, iyo kiiskan, kaydka waa mid aad u weyn.
Haddii aadan rabin inaad ku xayirto sawirada iyo qalabka, u soo ururi qaybo dayactir ah, ama aadan haysan waqti ku filan oo dhan, doorashada ugu fiican waxay noqon kartaa inaad iibsato buugga gacanta ee dukaamada gaarka ah.
Waxaa jira dhowr calaamado asaasi ah oo lagu ogaan karo in farsameynta abuuridda toonta ay ku habboon tahay hal kiis ama mid kale.
Mabaadi'da hawlgalka. Mabda'a ugu muhiimsan ee qalliinka oo dhan ee beeraleydu waa isku mid: guntimaha ama nalalka dhoobada waxaa lagu soo saaraa silsilad waxaana lagu beeray qulqulin qoto dheer, ka dib marka ay daboolaan dhulka. Doorashada awoodda iyo qalabka rowset waxay ku xiran tahay baaxadda goobta iyo cabbirka dhaqaalaha.
Noocyada ugu waaweyn waxa loo qaybin karaa sida soo socota:
Wixii jardiinooyin yar yar oo leh carrada dabacsan: hareeraha gacanta.
Wixii sirqo dhexdhexaad ah: dhirta tolka ee socodka.
Wixii beeraha ballaaran: seeder for tractor.
Miisaanka. Goobaha qashinka ah ee qashinka ah waxay miisaamaan ilaa 10 kg. Xaaladdan oo kale, mabda'a "shaqeyntii fududaa, ka fiicnaanta", maaddaama miisaannada dheeraadka ah ay adkeynayaan shaqada gacanta. Mashiinka qajaarka ee qoob-ka-ciyaarka ee qoob-ka-ciyaarka ayaa leh tiro ballaaran oo ah 10 illaa 70 kg.
Waxay ku xiran tahay habka iyo tirada safka. Qalabka afar-dhinac ah ayaa badanaa lagu dhajin karaa labada lugood iyo gawaarida. Qodobbada xayawaanka ku jira ayaa ah kuwa ugu weyn: laga bilaabo 70 ilaa 100 kg iyo wax ka badan. Halkan, xulashada qalabka waa in la sameeyaa iyada oo la tixgelinayo awooda qalabka. Hababka tiknoolajiyada yaryar ayaa miisaankoodu yar yahay.
Buugga: ugu jaban dhammaantood, laakiin marar dhif ah ayaa lagu iibiyaa dukaamada khaaska ah. Celceliska qiimaha qiyaastii 5000 p.
Socdaalka socodka: qaali qaali ah. Siciradu way kala duwan yihiin 20 000 ilaa 40 000 r.
Dhaqdhaqaaqa: ugu qaalisan. Noocyada ugu raqiisan waxay ku kici karaan wax ka yar 30 000 r, iyo kuwa qaaliga ah - in ka badan 100 000 r., Mararka qaarkood qiimaha waxay ku yimaadaan ilaa 200 000 r.
Noocyada Seeding. Nooc of seeding ma ku xiran nooca dhirta toonta, laakiin on size ee baaquli, qoto dheer ee beerto iyo tirada saf. Wixii nalalka tufaaxa, beerto waxay ku haboon yihiin oo kaliya leh baaquli yar yar, sida ay bixiyaan barashada spot - hal boostada waqti. Meelaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ahi waxay ku haboon yihiin ilkaha, moodooyinka noocaas ah waxaa lagu beeray hal meel. Qoto dheer ee abuurka abuurka ah: 6-8 cm, iyo toon ah toon: 15-20. Heerka seeding waxay kuxirantahay safka.
Beereylaha gacanta waxay ku dhow yihiin marwalba hal mar, iyo tirada safafka dharka mootooyinka waxay ku kala duwan yihiin 1 ilaa 4. Noocyada toonta ah, dhirta afargeeslaha ah ayaa ku habboon. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, maadaama ay bixiso xittaa beero. Iyo meelaha ugu ballaaran, waa wax ku ool ah in la isticmaalo beerista 6-tiir (caadi ahaan noocyada noocan oo kale ah ayaa loogu talagalay taraafikada), taas oo si weyn u badbaadin doonta waqtiga beerto.
Soo saaraha. Soo saarayaasha gudaha iyo kuwa Ukraine ayaa hogaaminaya suuqa: Poltava, Yarilo, Zvezda, Premium, Bulat, iwm. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ka heli kartaa noocyada shisheeye. Siciradu kuma tiirsanaan calaamada, laakiin waa noocyo gaar ah iyo cabbirada yaryar.
Nooca Magaca modelka Row Qoto dheeraynta (cm) Miisaanka (kg)
Buug-yarahan SMK-3 VPS27 / 1-10 / 4 3-isku xigta 1-3 3
Sicil Sawiriska Qalabka 1aad 1 saf 6-8 20
Mushkilada loogu talagalay TUSAALI 1-lakab oo leh qashin loogu talagalay Bacriminta Yarilo 1 saf 6-8 15
Sazhalka loogu talagalay qalabka 1-caleemo ee Yarylo oo leh gawaarida aasaasiga ah 1 saf 6-8 15
Socdaalka socodka 1-xarig tixgelinta abuurka CHS-1 1 saf 6-8 20
Qaabka 2-xariiqa CS-2 2-xabbo 6-8 44
Mishiinka loogu talagalay TM ProTek 1-4 saf (safaf goosan) 1-10 60
Sazhalka loogu talagalay isku-qabsiga dhuxusha-SCH-2 ilaa gaasta 2-xabbo 6-8 44
Dhaqdhaqaaqa Afar qaybood oo ES-4 ah 4-xabbo 8-10 73
Sazhalka for toon-Sargent-Saajin-4 oo ku socda traktor 4-xabbo 6-8 98
6-tiirbaaxe ah oo looxa dhejiyo gawaarida yaryar 6-isku xigta 6-8 135
Halkeen ka iibsan karaa?
Socodka: 2-warshad beereed (20 -25 kun oo doolar).
Diktoor: 4 saf (40-50 kun oo doolar).
Bixinta St. Petersburg iyo Moscow: 1 000 p. oo lagu daray 35 riwaayad / km ka baxsan magaalada (St. Petersburg) iyo 40 rubuc / km ka baxsan magaalada (Moscow).
Buugga: 1-riix (10 kun oo doolar).
Socdaalka gadaashiisa: 2-laab (laga bilaabo 20 kun oo roon), 3-isku xigta (laga bilaabo 30 kun roon), 4-isku xigta (laga bilaabo 40 kun oo doolar).
Gawaarida: 3-xariiq oo loogu talagalay tareenada yaryar (laga soo bilaabo 20 kun oo roon) iyo 6-isku xigta (laga bilaabo 60 kun oo doolar).
Waxaa jira beeraley caalami ah - laga bilaabo 100 ilaa 200 kun oo raqiis ah.
Pickup ee St. Petersburg iyo Moscow.
Qiimaha Koontada 500 p.
Duurjirta: 3-isku xigta (100 kun oo doolar) iyo 4-xabbo (200 kun oo doolar).
Waqtiga, kharashka iyo habka loo gudbiyo gobolku waxay ku xiran tahay culeyska shixnadda, cabbirka iyo halka ugu dambeeya, kiis kastana waxaa isku xira maamulaha dukaanka.
Dukaamada Hardware Store 100kwatt.ru.
Rakaabka: 2-isku xigta iyo 4-isku xiga (laga soo bilaabo 20 kun oo doolar).
Dareewal: 4-isku xigta (laga bilaabo 40 kun oo doolar).
Kharashka dhoofinta waxaa loo xisaabiyaa si gooni ah.
Sida loo sameeyo qorsheeye?
balaastiig ah oo la isku qurxiyo (waxay noqon doontaa weel si loogu abuuro miraha);
tuubo caag ah (waxaad u baahan doontaa inaad jarayso gabal ku habboon bangiga qoto dheer);
tuubo bir ah ayaa wax yar ka hooseysa;
2 lagu dhaqo si loo xakameeyo weelka;
Masjidku wuxuu awoodaa (waxaad ku dabooli kartaa uun);
Kiimikada waxay u baahan kartaa in la mariyo. Cirku waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaad ah - tani waxay muhiim u tahay xasilloonida dhismaha.
Ka qaad daboolka. Dhinaca dhinaca, dalool daloolka ah saddex xagal (abuur).
Iska yaree daboolka qasacada. Waxay noqon doontaa qalab lagu xakameynayo bacda geedka. Xirfadlaha waa in lagu dhajiyaa bangiga oo leh xadhig si ay u furto oo u xirto si xor ah.
Iska yaree birta tuubo caag ah iyo geli xarigga awoodda. Sidaas awgeed, bangigu kama yareeyn doono xadhigga.
Qeyb ka mid ah tuubooyinka balaastigga ah waa in lagu dhejiyaa tuubo bir ah - sidaas awgeed waa la soo baxayaa. Sidaa darteed, bangigu waa inuu rogaa - tani waa calaamad muujinaysa in naqshadu si sax ah u shaqaynayso.
Suunka waxaa la geliyaa tuubbada birta. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo lowska u dhexeeya laba warshad - sidaas darteed wareeggu wuxuu noqon doonaa bilaash.
Laga soo bilaabo dhinaca balaastigga, ciddida kulul waxay ka dhigtaa 2 godad. Dhexdhexaadiyaha ciddiyaha ayaa noqon doona mid la mid ah sida toon ah ee toon, kaas oo lagu beeray.
Qalabka alwaaxa, ku darso dalool bolu ah oo ku xir xargaha (jar).
Qalbigga iyo fiilada ku dheggan xarkaha, ka sarreeya taangiga.
Saliidda qadhaadhka ah;
dhuumo bir ah;
hubka birta iyo rinjeerka (haddii aad adigu sameyso wheels naftaada);
silsiladda (ama suunka);
Sheyga: mashiinka alxanka.
Isku duwo qaabka. Laga soo bilaabo wadiiqooyinka birta ee "siddeed" waxaad u baahan tahay inaad xirto 2 barbaro isku mid ah iyo 3 xubin ka kooban. Cabbirka waxaa loo xisaabiyaa horay.
Dhinacyada xubnaha ka ah si ay u xirtaan godka leh fargeeto iyo 2 xabbo oo isku xiran (dhinaca hoose).
Ku dheji taageerada tuubooyinka abuurka dhinacyada qaababka.
Si aad u xoojiso qaabka xubin ka mid ah xubin ka mida iskutallaabta u gudbisa qorraxda waxaad u baahan tahay inaad xirto boobka. Xoojinta godka leh laba taarik iyo layliyo birta ah (birta wax yar 5 mm). Waa inay ahaato saddexagal midig.
Samee tuubo. Si arrintan loo sameeyo, waxaad gooyaa xaashida tufaaxa si waafaqsan xajmiga shaxanka iyo isu-gooyaan geesaha birta. Alaabta la dhamaystiray waxaa lagu daboolaa saliideedka dhoobada ah waxayna u hadheen wakhti si ay u engegaan. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xidho xargaha kabaha gudaha gudaha tuubada si aaney u waxyeeleynin toonta ama toonta.
Hoodarka waa in lagu rakibay shaxda kor ku xusan. Naqshadeynta waxaa lagu dhejiyay afar xarkood oo la xirxiray, ka dibna suunka lagu rakibay.
Gaadiidka laguma wadi karo, oo ku dheji gacmaha.
Ku dheji dusha sare ee maskaxda (waa inay taageeraan miisaanka ilaa 25 kg).
Rixeeyayaasha hirgelinta dhismaha (ku dheji dharka).
Ka samee qalab wheel. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad xirtaa qaanadda tuubbada si aad uhesho, godadka qodista ee ku jira nabraha lagu hayo sarreenka. Ka dib markaad dhamaystirto, hubi inaad soo dhejisid biinanka.
Muraayadaha waxaa sidoo kale lagu soo ururin karaa adiga. Si aad tan u sameyso, ku dheji laba rikoodh oo ku yaala hubka birta oo ku dheji khadka.
Samee hanti saaraha. Qaybaha birta ah ee weldhada ah ee qaabka laba jibbaar, ka dibna ku xir wiishka, dhererka tuubooyinka tuubada ayaa sidoo kale welded (gudaha dhexdiisa waxaa jira siyaabo lagu beerayo lugaha).
Weld jeex jeexjeex ah oo ka soo duudduuban birta tuubada. Si loo xakameeyo qoto-dheeraadka furrowska, waxaa lagama maarmaan u ah inay kor u qaadaan oo ay hoos u dhigaan wareegyada wareegga.
Si aad u wado mishiinka gawaarida ee ku xiran muraayadda mashiinka muusikada adoo isticmaalaya silsilad ama suun.
U diyaari kursiga iyo lugaha. Si aad u fadhiisatid, baararka biraha waxaa lagu xiraa qaabka gudahooda loo xareeyo. Kuraasta si sahlan, waxaad garaaci kartaa maro. Lugaha, waxaad u baahan tahay inaad ku soo lifaaqdo naqshadda guud ee barta.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo digniinta
In soo saaridda mid kasta oo ka mid ah tababarka waa in ay u hoggaansamaan amniga. Qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed waa in loo isticmaalo: gacmo gashi, kabo, iwm.
Qorshaha loo yaqaan 'motoblock' waa adagtahay in la isku soo ururiyo iyada oo aan la isticmaalin xirfadaha alxanka. Xaaladdan oo kale, waxa fiican inaad ka iibsato dukaanka. Qodobbada loo yaqaan 'motorblock' ayaa miisaankiisu badan yahay, iyo inta lagu guda jiro qalliinka, abuurka iyo qofka ayaa miisaankoodu culus yahay. Sidaa darteed, bareeraha toonta ayaa u jeesan kara. Si aad tan uga fogaato, waxaad u baahan tahay inaad xirto miisaanka. Waxaa lagugula talinayaa inaad si wadajir ah u wada shaqeysid: hal qof ayaa ku hogaamin doona socodka gadaashiisa, halka kan kalena uu ku lug yeelan doono.
Garlic waa qayb ka mid ah waxyaabaha ugu jecel diyaargarowga suxuunta badan, sidaa daraadeed waxaa jira dalab dheeraad ah oo loogu talagalay. Wixii beeraha guuleysta waxaan kugula talinaynaa inaad aragto maqaallada khubarada:
Goorma ayay ku haboontahay in la fuliyo nidaamka beeritaanka guga?
Sida loo abuuro noocyo kala duwan oo jiilaal ah xilliga gu'ga iyo dayrta?
Maxaa la abuuri karaa kadib khudradan?
Maxaad u baahan tahay inaad ilaaliso wakhtiga soo degidda?
Sida loo koro guriga?
Beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay waa kuwa ugu habboon moodooyinka ay sameeyaan.